Disika efa laoka no averimberin’ny FAT – MyDago.com aime Madagascar
Disika efa laoka no averimberin’ny FAT
Tsy nahakivy ireo mpitolona eny amin’ny magro Behoririka ny tsy fahatongavan’i Neny farany teo. Mbola manohy ny hetsika hatrany ireo zanak’i Dada, ary tsy hijanona raha tsy tonga eto an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana Marc. Androany dia anisan’ny nandray fitenenana teny Andriamatoa Solahimena. Nisaotra ny Ankolafy Ravalomanana, ny tenany amin’ny fitondrana fanomezana ireo tra-boina tany amin’iny faritry Brickaville iny. Mikasika ny raharaham-pirenena dia nambarany fa feno miaramila frantsay tonga eto amintsika. Midika izany fa « mersenera » hanampy ny miaramila-dRajoelina ireny. Diska efa laoka izany ataon’ny fat izany. Efa nisy ny fotoana niantsoantsika ny miaramilan’ny Sadc ho avy eto. Ny zavanisy anefa, hoy Solahimena, dia nilaza ny fat rehefa tonga izany dia ho avy ihany koa ny miaramila frantsay. Tsy izay anefa no izy fa hokorontanina ny miaramilan’ny Sadc, ary hanofana olona hanakorontana ny asan’ny Sadc izy ireo raha nisy izany. Amin’izao fotoana izao dia aongana Rajoelina dia miaramila frantsay no hanala azy eo. Dikany dia potehina ny tondrozotra, mba tsy hiverenan’ny filoha Ravalomanana. Avy eo dia averina amin-dRajoelina indray. Izao anefa, hoy Solahimena, nisy olona misaina ihany ao, nilaza fa rehefa aongana dia tsy miverina intsony, na dia hifampitifitra aza isika. Ny zavanisy nanjo an’i Tojo dia heverin’ny fat fa vendrana ny Ankolafy Ravalomanana. Maninona moa ny alika no ohatry ny romotra hanaikitra rehefa misy olona mandalo ? Tahotra no mahatonga izany. Izay no mahatonga an-dRajoelina manaotao foana io Efa kely sisa ny hipetrahany eo ao Ambohitsorohitra. Ny sori-dalana no nametra azy ho filohan’ny tetezamita, fa rehefa tsipahiny io dia izay koa ny aminy. Ny hialan’ny Ankolafy Ravalomanana ao anatin’io no ataon’izy ireo. Izahy anefa hoy Solahimena, hijanona ao raha tsy misy tafondro hahafaty anay angaha, na ianareo vahoaka no miteny hoe mialà ao izay vao miala izahay.
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 février 2012 21 février 2012 Catégories Politique
21 pensées sur “Disika efa laoka no averimberin’ny FAT”
Ny talen’ny frafrika sy ny lehiben’ny HAT:
22 février 2012 à 2 h 07 min
diska efa loaka sy goaka fa tsy laoka kosa é. Laoka izany anie ry namana ka sakafo é. Hihihih, mba indro kely ny ahy iny.
Goaka fanahy, goaka saina Goaka partout ireo. Sans arrière pensée fa GOAKA fotsiny tsotra izao ireo Fatimpoza masosopoza ireo. Tsy miteny ratsy aho an.
K’ionona fa tsy MIBANAKA be izany rehefa LOAKA!
Sao dia miteniteny foana eo koa ary ny zanak’i dada??
K’iza no nanao sonia ity sori-dalana e!!!nahatonga azy vao maika HANJAKAZAKA toy izao???
aza ody idiana tsy hITA, iza no NILINGITRA mbola nanaiky io JIOLAHY io ???aza odiana FANINA.
Izao hanjakazakany tsara fa azy sy ny frantsay ny TANANA.
Izay ahazo an’i domelina any tsy rarahianay na HAJENJINAREO any an-tatatra aza fa ny fantatray dia
TOKANA: DADA MODY HITONDRA NY TANY SY NY FANJAKANA.
Aza asiana fandrebirebena @ resaka domelina fa taritarito eny @ arabe ny FATININY raha HISY OLONA
IRAY HITSETRA An’INY EO na ireo miseho ho manoana azy aza ,FITAOVANA HINANANA FOTSINY iny
fa tsy MISY HASIAN’i OLONA SIRA an’iny akory na dia ohatra ny loham-panjaitra aza,FAKO! FAKO! FAKO!!!
Izay hatao hatao dia arosoy ny PAIKA rehetra fa ela be e!!efa malailay ny VAHOAKA!MIJALY!!!!
Misaotra Solo Razafy @’ilay sary fa aleo mba asiana
fitokonana kely koa ato @ Mydago ato.(aza tezitra an!!)
ALEFA MIARAKA!VIDEO! VIDEO! VIDEO!!!!!!!!!!!!!
Fanontanianao hafa no namaliako azy !
22 février 2012 à 10 h 03 min
Ampasanimalo : Masera mpanao kung fu nahasambotra mpangalatra
Efa fanaon’ity lehilahy iray antsoina hoe Victor ny mangalatra any amin’ireny tranona relijiozy ireny. Tratra hatrany anefa izy ary alefa migadra. Raha vao tafavoaka ny anao lahy dia mamerina heloka indray. Tamin’ny alahady teo, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany, tonga teny Ampasinimalo misy tranon-dry masera izy. Niditra ny vavahady ary nilaza fa hitady an’i mopera. Nisy namaly azy nanao hoe, mbola manao lamesa izy. Ity farany ity mao tsy dia salama loatra fa sendra nandalo dia nanome lamesa. Nihevitra ilay nampandroso fa havan’i mopera i Victor. Nampandrosoana tao amin’ny efitra fandraisana izy. Rehefa lasa ilay mpampandroso, niakatra tany ambony rihina ny anao lahy. Tsy nampoizina ny fahatongavan’ilay masera iray. Teo am-panokafana ny arimoara misy ny tele izy no tratra. Nanontaniana izy ary nisdandoka anarana. Fantatr’ilay masera avy hatrany anefa fa hay Victor mpangalatra gaigilahy. Ity nahatratra azy ity dia voalaza fa efa nanao hay ady kung fu tany aloha tany. Tsy fantatra na saika hanohitra ilay mpangalatra na ahoana fa izy efa notaritaritin’i masera nidina avy any ambony any no hitan’ny rehetra. Nilaza tamin’ny manodidina ilay relijiozy. Ireo indray no nampandre ny polisy. Nisy iray sendra tsy nandeha niasa no naka azy tao amin’ny tokotan-dry masera tao ary nanatitra azy tany amin’ny biraon’ny polisy eny amin’ny boriboritany faha-2. Fantatra fa voasambotra hatrany i Victor amin’ny halatra ataony. Rehefa mivoaka ny gadra anefa izy dia mamerina heloka indray
Sao dia manao Kung FU Ranavalona fa TGV mantsy mangalatra foana.
22 février 2012 à 10 h 10 min
Tany na firenena aiza, no tsy misy frantsay ?
KM!I Alliot Marie anefa matikambo be ohatran’inona tamin’ireny izy ministry ny fiarovana ireny fa avo lenta ny miaramila tsotsoka.Inona tratra izany!May indray aloha ny endim-boanjon’i Lekely.Midina ny kôty e!
Maromaroa ny ohatra izany!!!!fa inona no nataon’ireo tsotsoka ireo
tany anefa hono ry Kintana??ny Gasy angaha sahy manao an’izany,
ireo indray aza no LELAFINY.moaka be loatra ilay Gasy.
Tena mba tsy hitako indray iny Masera Kung fu iny, mba nahalalla menatra ve izay ilay Jiolahy io???
tsy vitan’izay resimbavy fa sady MASERA???maromaroa ny ohatra izany!!!!
hilaintsika izany Masera izany @ fahatongavan’i dada ry Zareo sa ahoana???
Izaho tsy mikotrana izany fa izaho mahatoky Zanahary mpiahy ahy ry Bemafohy a!
Efa eo ihany ianao ry Bemafohy fa efa vita izay ilay Carnaval tokony efa mba hamaly ahy daholo ilay olona.
Bedy indray ve izao aho ry Bemafohy @’io hoe » Moaka be io??? »
Kanosa no tiako lazaina re e!!fa izaho koa vatambatany izay ihany rehefa miteny,
AZAFADY be ry dà a!!aza tezitra!!!!
Io koa fa nisy mpanao Gazety voatifitra 2 tany Syrie dia ny iray Frantsay.
Enga anie ka ilay frantsay TRANON-DAINGA AZAVANONA iny izay.
Ranavalona!Tsy tezitra izany aho fa ny marina maharesy foana na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona.
Vao nahazo fanampiana avy amin’ny UE ny Maurisiana satria demokrasia ny any.NY antsika mbola mikatona ny robinet azony tsy tian’ny olona ny mpanao didi-jadona.
Miandry ny valiny omenao foana e!
Tsy mahita ve nareo Zahakosy reto woe tena manao resa-jaza? Hitako tsisy résultat mihitsy zay ataon’ny rainy sy ny zanany. Manala azy araka le fiteny mahazatra e! raafotsy be very laona sisa ka miandry zay higadonany.Na de hita mivandrandra an-rsary zao any @ madagate aza, ny perquisition nataon’ny DTS, ny @ireo trafic sary sikotra vita @ bois de rose, ireo fonosana rongony, ny pôzin’ny Tojo mamon’ny daina be, raha mba te hiteny lay vady kely endaka kely, tonga de akombom-bava otran’ny fataon-dRaosy @ Lalao, nanasonia rahateo io madamakely io, zay mazava be, de ahodina ny resaka, avily atsy sy aroa, kanefa ireny no porofo mitohaka @ tenda, tsisy ady hevitra. De io koa, fa tratra araka ny fanadihadiana tany @ zandary GPII, izay voarohirohy saika hamono ny filoha Rajoelina miaraka àireo manam-boninahitra vitsivitsy, ny num phone sud af n-dRaosy, izay commanditaire, voalaza ao avokoa ny vola saika hanatanterahana izany fa nandamoaka e! io le nolazaiko woe, ny anareo vao miainga, ny an’ny olona efa any ambovonana. De aza manantena ry sainjaza kely rehetra tsy ampy solaitra otran-drainy ireto a!
Ho an’ny foza:
La formation des élites à l’étranger ? Une priorité pour la HAT
Publié le Mercredi 22 février 2012 à 15:43
Pour preuve, cela va donc bientôt faire 2 ans que les étudiants malgaches boursiers à l’étranger n’ont plus reçu de bourse d’étude de la part du gouvernement malgache (ou de ce qu’il en reste), bourse qui était jusque là délivré une fois par an.
Sont concernés au moins 600 étudiants dont 300 au Maroc, Chine, une centaine en Russie, 50 et plus à Cuba, Turquie ou encore en Algerie.
Fa inona koa no mbola hataon’ny mpianatra Gasy any Russie ry Bemafohy???
ireo rehetra tany taloha ireny azy lasa nivarotra MASAKIKY ( masikita) daholo??
Avelao ahita ny any ivelany fa toa ny ao an-toerana ihany mantsy no fahanan-dalitra, sady ireto firenena toa
sahirakirana daholo???afaka ny baraka marina!!dė ny tena no menatsa!!!ny zėsta anefa efa hamono mpamosavy.
Ranavalona! izao no atao hoe:andron’i Domelina.
Ity koa mangony fotsiny:
09:30 – 22/02/12Les ordures commencent à s’amonceler dans les rues de Tana. La recrudescence de certaines maladies est à craindre.
TSY ALEO IHANY TAMIN’NY ANDRO’I DADA RY MALAGASY ISANY.
Ny an’i TGV dia:
23 février 2012 à 1 h 29 min
le représentant résident de la Banque mondiale estime que la présidence à Madagascar concentre encore beaucoup de pouvoir, si on ne cite que l’armée et la justice. La Banque mondiale insiste de ce fait sur les programmes de gouvernance.
Date : 22/02/12
RAHA MBOLA IZAO DIA TSY HAHITA FANKATOAVANA
Ny mampalahelo dia mbola misy mahasahy miteny fa arakaraky ny fisian’ny tsy fietezan-javatra, no hijanonany ao anaty zaoridira ao !
Amin’ny asabotsy mifankahita izany ry Bemafohy ! Rue de l’Isly, dia taomy ny namana !
de aiza indray no hahita vola rehefa tena banky ropotra io tetezamitatra io satria tsy hisy hanome intsony ny avy any ivelany,ny vahoaka ary etsy andaniny efa mifampihinana, ny halatra sy ny vaky trano mitombo andro aman’alina.
Ny vono olona dia ny fanolanana manginy fotsiny efa HIKIPIANA fotsiny.
Misy vao2 azoko homena ihany koa ity:
Efa 2 andro izao gidragidra ny ao Saint Denis ( La Reunion) migrevy fa lafo be ny fiainana.
Ao frantsa aza efa hitako fa lafo be fa ny any angamba dia tsy lazaina intsony????mamaky
Magasin koa ireo, ny hataony @ tany mahantra rehetra ihany no miverina aminy.
24 février 2012 à 3 h 17 min
Ranavalona a, LOAKA ho’aho. Ny différence anie efa io mazava lazaiko ery ambony é.
Ny fatimpoza dia efa LOAKA ny sainy sy ny fanahiny (TROUE, WHOLE, HUECO, LAVAKA)
Ny laoka dia dia hohanina amin’ny vary.
Rabe fozalahy be atody lamokany. OUSTE MIALA
Précédent Article précédent : Nitondra fanampiana ny tra-boina ny « zanak’i Dada »
Suivant Article suivant : Komity Miaro ny Fiainam-Bahoaka : namantatra ny zava-misy marina